यौनांगमा भन्दा यी भागमा गरिने चुम्बनले महिलालाई १०० गुणा बढी उत्तेजित बनाउछ, जान्नुहोस « Sajha Page
यौनांगमा भन्दा यी भागमा गरिने चुम्बनले महिलालाई १०० गुणा बढी उत्तेजित बनाउछ, जान्नुहोस
प्रकाशित मिति: November 5, 2017
एजेन्सी, १८ कार्तिक | चुम्बन गर्दा हाम्रो शरीरले प्रतिमिनेट २६ क्यालोरी ऊर्जा खपत गर्छ । यसको अर्थ के हो भने मोटोपन घटाउन पनि नियमित चुम्बन आवश्यक छ ।एक अध्ययनअनुसार मानिसले यौन सम्पर्कभन्दा बढी चुम्बन गर्दा सम्बन्ध बढी संवेदनशील हुन्छन् ।कसैले कसैलाई सामान्य चुम्बन गर्दा अनुहारका दुईवटा मांसपेशी मात्र सक्रिय हुन्छन् भने फ्रेन्च किस गर्दा अनुहारका ३४ वटा मांसपेशी सक्रिय हुन्छन्।अहिले प्रचलनमा रहेको फ्रेन्च किसको प्रारम्भ सन् १९२० मा भएको मानिन्छ। कुनै पनि महिला–पुरुषले सन् १९२० अघि सार्वजनिक रूपमा फ्रेन्च किस गरेका थिएनन्।महिलाहरू चुम्बनमार्फत नै एक्साइटमेन्टको चरण पार गर्दै क्लाइमेक्सको चरणमा पुग्छन् । हेर्नुआ भिडियोमा –
८८ वर्षीया शिला संसारकै बूढी वेश्या, अझै सन्तुष्ट पार्छिन हप्तामा १० जना ग्राहक (भिडियो सहित)
शिला जो अहिले ८८ वर्षकी भइन। उनि कुनै साधारण हजुरआमा हैन, उनि हुन् बेलायतनिवासी विश्व कै बुढी वेश्या।
८८ वर्षको पाको उमेरमा पनि उनले एक सातामा १० जना ग्राहकलाई सन्तुष्टि दिन्छिन् । एक घन्टामा २ सय ५० पाउन्ड कमाउनु उनको क्षमतामा ह्रास आएको छैन । उनी तीन वर्षअघि नै संसारकै बूढी वेश्या घोषित भएकी हुन् ।
अग्लो हिल भएको जुत्ता र मिनिस्कट लगाएर ग्राहकलाई रिझाउन खप्पिस उनी आफू निकै ‘सेक्सी’ भएकाले वेश्यावृत्ति अँगालेको हाकाहाकी बताउँछिन् ।
१० हजारको ब्रा, ५ हजारको अन्डरवेयर प्रयोग गर्ने नेपाली – अभिनेत्री रेखा थापा कुन ब्रान्डको भित्रि वस्त्र लगाउछिन ? जान्नुहोस
सामान्यतया अरूलाई देखाउन र आफ्नो पर्सनालिटीका लागि मान्छेहरू महँगो कपडा लगाउँछन् । तर, बाहिरी कपडाहरू मात्र होइन, भित्री कपडाहरू पनि महँगा र ब्रान्डेडमै मोह बढ्दै गएको छ । ५ हजार रुपैयाँसम्मका अन्डरवेयर र १० हजार रुपैयाँसम्म ब्रा नेपाली बजारमा बिक्री हुने गरेको छ । खासगरी नेपालका सेलेब्रेटीहरू इनर वेयरमा निकै ध्यान दिन्छन् । अन्डरवेयरको नेपाली बजार र सेलेब्रेटीहरूको रोजाइबारे रिपोर्ट :
तर, नायक अनमोल केसी भने आफूले नेपालमा पाइने कुनै पनि ब्रान्डको अन्डरवेयर प्रयोग नगर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘मलाई टमी हिलफिगर ब्रायडको अन्डरवेयर मनपर्छ । तर, यो ब्रान्ड नेपालमा नपाउने भएकाले विदेश गएका वेलामा उतैबाट ल्याउँछु । मैले अहिलेसम्म महँगोमा तीन हजारसम्मको अन्डरवेयर लगाउँदै आएको छु ।’ अनमोलजस्तै धेरै नायक–नायिकाले विदेश गएकै वेला अन्डरवेयर किनेर ल्याउने गर्छन् । गायिका तथा नेतृ कोमल वली पनि आफूले विदेशबाटै अन्डरवेयर खरिद गर्ने बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘मैले प्रायः भित्री वस्त्रहरू विदेशतिर जाँदा किन्ने गरेकी छु । ब्रान्ड हेरेर दुई हजारदेखि आठ हजार मूल्यसम्मको किन्ने गर्छु ।’ कोमलले प्रयोग गर्ने केही ब्रान्डहरू नेपालमा नपाइनेसमेत छन् । अन्य सेलेब्रिटी भने पाँच सयदेखि १५ सयसम्मको अन्डरवेयर प्रयोग गर्छन् । नेपाली बजारमा पा“च हजार रुपैया“सम्मका अन्डरवेयर बिक्री हुन्छ ।
ब्रान्डेड इनर वेयर कसरी चिन्ने ?– नवनीत गुप्ता, सञ्चालक, जक्की सोरुम दरबारमार्ग
इनर वेयरअन्तर्गतको कुनै पनि कपडा किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसैको अथोराइज सोरुममै गएर किन्नुभयो भने ठगिनबाट जोगिनुहुन्छ । कपडा किन्नुभन्दा पहिले कस्तो ठाउँबाट किन्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुस् । किनभने धेरैजसो ब्रान्डेड कम्पनीहरू आफ्नो अथोराइज सोरुमहरूबाटै बेच्ने गर्छन् ।
जक्की : जक्की अमेरिकन ब्रान्ड हो । जक्की ब्रान्डअन्तर्गत विशेषगरी भित्री वस्त्रहरू पाइन्छन् । यो ब्रान्डअन्तर्गत महिलाले प्रयोग गर्ने ब्राको मूल्य एक हजारदेखि दुई हजार आठ सयसम्म पर्ने दरबारमार्गस्थित जक्की सोरुमका सञ्चालक नवनीत गुप्ताले बताए । त्यस्तै, महिलाले प्रयोग गर्ने अन्डरवेयरको मूल्य तीन सय ५० देखि ७ सय ५० र पुरुषले प्रयोग गर्ने अन्डरवेयर तीन सय ५० देखि एक हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म पर्छ ।
भिक्टोरिया: सेक्रेटस् यो अमेरिकन ब्रान्ड हो । यो ब्रान्डअन्तर्गत विशेषगरी इनर वेयर पाइन्छन् । भिक्टोरियाले हरेक वर्ष विभिन्न ब्रान्डका कपडा बजारमा ल्याउने गरेको छ । यसमा महिलाले प्रयोग गर्ने ब्रा विश्व बजारमा धेरै महँगा छन् । तर, नेपालमा २ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्ममा पाइन्छ । यस ब्रान्डका भित्री वस्त्र धेरैजसो फेसन स्टाइलिस तथा चुजी युवती र धनाढ्य परिवारका महिलाले किन्ने गरेका छन् । यो नेपालमा उपलब्धमध्ये सबैभन्दा महँगो ब्रान्ड हो । यस ब्रान्डअन्तर्गत महिलाले प्रयोग गर्ने अन्डरवेयरको मूल्य एक हजारदेखि दुई हजारसम्म पर्छ ।
सफ्ट प्रिन्सेस: यो थाइल्यान्डको ब्रान्ड हो । यस ब्रान्डअन्तर्गतको ब्रा विशेषगरी विवाहित र अविवाहित महिलाले, स्टाइलिस र मोडलहरूले प्रयोग गर्छन् । यसअन्तर्गतको ब्रा नेपालमा पाँच सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गर्छ । यस ब्रान्डअन्तर्गतको पुरुषले प्रयोग गर्ने अन्डरवेयर पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म बिक्री हुन्छ । यो ब्रान्डमा ट्राउजर, ज्याकेट, टिसर्टलगायतका कपडा पनि उपलब्ध छन् ।
भित्री वस्त्रका विषयमा यसो भन्छन् नेपालका सेलेब्रिटी :
डेढ हजारको अन्डरवेयर लगाउँछु– पल शाह, नायक
भित्री वस्त्र किन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्छ– नवीना लामा, विद्यार्थी नेतृ
महिलाको स्वास्थ्य र भित्री वस्त्र एकदमै अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । यसले गर्दा भित्री वस्त्र किन्दा महिलाले एकदम ध्यान दिन जरुरी छ जस्तो लाग्छ । म पहिला चार–पाँच सय पर्ने भित्री वस्त्र प्रयोग गर्थें, तर एकपटक मेरी दिदीले भिक्टोरिया सिक्रेट ब्रान्डको गिफ्ट गर्नुभएपछि त्यही प्रयोग गर्न थालेँ । म त्यस्तो ब्रान्ड नै प्रयोग गर्ने मान्छे त होइन, तर सहज भयो भने आफूलाई छुट्टै कन्फिडेन्स हुन्छ जस्तो लाग्छ । मेले स्पोर्टस् ब्रा पनि आफूलाई सहज हुने खालको प्रयोग गर्ने गरेकी छु । जगिङ जाँदा नाइक, एडिडासको स्पोर्टस् ब्रा प्रयोग गर्छु । – गज्जबबाट
सपना सबैले देख्छन् । यो धुव्रसत्य कुरा हो । हाम्रा बुढापाकाले सपनाबारे भन्ने गर्छन्, ‘तिमीले देखेको यो सपना शुभ हो वा यो अशुभ ।’ केही सपना यस्तो देखिन्छ, जो सेक्ससँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यो आफ्नै पति वा पत्नीसँग सेक्स गरिरहेको सपना हुँदैन । कुनै परपुरुष वा परस्त्रीसँग सेक्स गरिरहेको सपना देखिन्छ ।
यस्तो सपनाको अर्थ के हुन्छ ? के सेक्सको सपनासँग तपाईको कुनै सम्बन्ध छ ?
जान्नुहोस्, प्रायजसो सबैले भोग्ने गरेका यी पाँच प्रकारका सेक्स सपनाका अर्थ के हो ?
यी हुन संसारका १२ खतरनाक सडक – जहाँ आँखा झिमिक्क गर्दा ज्यान जान्छ(भिडियो सहित)
एजेन्सी, १८ कार्तिक | सवारी दुर्घटनाकै कुरा गर्ने हो भने नेपालका सडक विश्वकै खतरनाक सडकहरुमा पर्देछन्। तर नेपाल बाहेक संसारका यस्ता सडक छन्, जहाँ चालकले ध्यानपूर्वक गाडी नचलाइ सुखै छन्, यहाँ लापरवाही गाडी चलाउने नसोच्दा पनि हुन्छ । यी हुन् विश्वका खतरनाक १२ सडक:
१. स्टेल्भियो पास -करिब ९०४५ फिट उचाइमा रहेको उत्तरी इटालीको यो सडक एकदमै खतरनाक मानिन्छ । भिरालो जमिनमा ६० देखि १८० डिग्रीमा घुमाउरो आकारमा बनेका छ । यस सडकमा कसैले पनि लापरवाही गाडी हाँक्न सक्दैन ।
२.मेक्सिकन हाइवे क्यालीफोर्निया -पेन्निसुला देखि कावो सान लुकाससम्म फैलिएको यो सबैभन्दा लामो हाइवे दुइ लेनको सडक हो । यस सडक निर्माण योजना सन् १९७३ मा पुरा भएको थियो ।
अरु के के छन् त हेर्नुहोस भिडियोमा –